Outstanding BlueSkyian (12) – BSI Learning Academy
Home Outstanding Blue Skyians Outstanding BlueSkyian (12)
Admin August 30, 2021 August 30, 2021 Outstanding Blue Skyians
We would like to introduce you to one of our Outstanding BlueSkyians – Theint Nandar Aung who stands out as one of those kind and qualified teaching associates of Blue Sky International Learning Academy. She started joining us asavolunteer teacher trainee on our Work-and-Study or On-job Training Program in 2019.
Over the years, Theint has learned to improve her English language skills and sharpen her teaching skills with us, having involved in lesson planning and teaching both in-person and online classes of different age groups and different levels.
Theint has shared her journey with Blue Sky International as below.
It was back in the first week of the year 2019 that I applied foravolunteer position at Blue Sky International Learning Academy. To be honest, I, at first, didn’t intend to becomeateacher here because I did not have that confidence in me to dream of becoming one. At that time, I was going through that phase where you wonder who you really want to be and what you will become in the future. Whenever I came across English teachers on some Facebook pages, I imagined being one myself. But, I had no idea where I should go and what I should do to pursue the skills required and experiences demanded to embark onateaching career and start working asaqualified teacher.
Blue Sky International (BSI) did mention about welcoming those who are interested in joining the training program for teachers, but I did not pay much heed to that idea. All I knew was that I needed to volunteer foraminimum of three months on weekends (for about 100 hours in total) and I was eager to help with anything, be it rearranging books or dusting bookshelves. It was more than enough as long as I could learn something there. But BSI hadagreat deal to offer us and I was surprised, inapleasant way, to find out the breadth of learning opportunities it was willing to provide us with.
I was overjoyed to receive the email that informed me I was invited toapersonal interview. I, at the time I applied for that volunteer position, did not even dare to expect my application form to be read attentively. On the 13th of July, I went to see Teacher Hla Win May Oo @ Wendy (the founder of BSI) for the interview as planned. I remember being asked why I wanted to becomeateacher. My answer was “Because I don’t believe there is something I can do better than teaching” and it was true.
Since I was in my kindergarten, I had had that strange passion for teaching and I would write on the back of the wooden wardrobe my father bought my mom asawedding gift, pretending I was the teacher to those invisible imaginary students of mine. You can still see scratches, the result of usingabamboo stick to point, on the smooth surface of that cabinet asareminder of my childhood game. One day, my father decided it was time to paint the wood to save it from further destruction, but I never lost the chance to pretend asa“teacher” because I had friends at school who later became the participants of my teaching game.
After my matriculation examination, I volunteered at my village school for about three months. And it was when I made up my mind to never work as an educator after witnessing all those complicated social issues going on among my high school teachers, except that my confidence did not lie in any profession but in teaching.
To make the long story short, all I possessed when I started off asavolunteer at BSI was an intermediate level of English and an unbelievably enthusiastic mind. As I lived numerous days without the dream of becoming an educator, my confidence to stand in front of an audience and teach had been long lost at that time. But Teacher Wendy trusted me when I couldn’t find the courage to believe in myself. And I am positive her confidence in me was one of the reasons why I am an English teacher today.
My interview was onaSaturday, and I was told I could start that day. I also learnt there were career opportunities offered to the volunteers if they could prove their potential and capability during the three-month period of volunteering. Blue Sky International’s goals and values were shared, and they were also interested in the applicants’ wants and needs. I was asked whether it was employment opportunities or work experience or scholarship programs that I was after.
On Sunday that week, I started my work at BSI. I don’t believe “work” is an appropriate choice of word, so I would go for “training.” I was offered the chance to closely observe my seniors’ teaching, join Teacher Wendy’s IELTS classes and witness the way they delivered their lectures and how the students of various ages were treated and trained with care.
Not long after I joined, the TKT training course for professional teachers who intend to teach English asalanguage was started and it was an incredible opportunity to be invited into that class. I gatheredalarge amount of knowledge concerning teaching methodologies and also got to listen to Teacher Wendy’s attitudes towards teaching, learning, students and all sorts of wonderful things she experienced during her seventeen years of mentoring, coaching, teaching and training.
In TKT class, all the trainee teachers including me got to do teaching practice, observe each other and comment on our peers’ performance. Teacher Wendy herself provided us with feedback as well. After all the classes were finished for the day, the time to self-study came and it was when I practised Cambridge English and IELTS coursebooks to improve my language skills. Eventually, I started teaching Cambridge English for Young Learners, such as Starters, Movers and Flyers classes and I felt pretty awkward at first due to the lack of practice and experience, but I would try to get better day by day by watching Teacher Wendy and other senior teachers managing their classes, and believe me, it really helped me develop my teaching ability.
It was in TKT class that I learned how to do lesson planning and I put that knowledge into practice when I started teaching small-sized young Learners’ classes. In the beginning, it wasn’t easy for me to come up with class activities that were decent enough, but after regular observations in other fellow teachers’ classes andagreat deal of reading and browsing the Internet, I gradually started to get my head around this whole thing. Joining Teacher Wendy’s IELTS classes and self-studying the other material available at BSI didagreat job in honing my English language proficiency. When I planned the lessons for the Starters, Movers, Flyers, KET and PET classes, I myself had to go through the lessons I was teaching the next day first and it was the chance I gladly grabbed to systematically learn whatever I missed asachild once again.
I was also trained to be able to find mistakes while checking and correcting students’ work, especially writing. Honestly, as I, for the most part, taught English asalanguage to myself rather than taking lessons from an outstanding teacher, I admit that I only seemed to haveasuperficial knowledge of the language. So, I am not ashamed to admit that only after being taught by Teacher Wendy, I started to know English inamore systematic and explicit way. In the past, I could never figure out where I went wrong, let alone correcting other people’s mistakes.
After3months of volunteering, I went on to work asateacher at BSI, but it didn’t mean my training period was over. I was encouraged to study hard, and I still had to do observation in other teachers’ classes and learn from them. Teacher Wendy let me join her classes, asastudent, as an observer, and asatrainee teacher, and I was also givenachance to practice-teach for (15) or (20) minutes. At the end of the class, she would provide feedback on my work.
When BSI started introducing online classes due to the coronavirus outbreak,alarger number of students who belonged to different age groups and different regions of Myanmar came and joined us, which in turn granted me much greater opportunities to experience and learn.
I had been working at Blue Sky International for aboutayear when we started running online courses, but Teacher Wendy was still continuously teaching and offering me guidance. She would come and observe our classes herself, give feedback, and suggest at our meetings which activities suit which learner groups depending on their ages and levels of language proficiency. We also received advice on how our students can be trained to not only become academically proficient, but also to grow up as well-mannered and polite young individuals with decent communication skills.
At BSI, we still observe each other, give suggestions to each other and learn from one another. Sometimes, we would haveagood laugh talking about how almost all BSI teachers unexpectedly gather in Teacher Wendy’s Zoom class as we come to listen and learn from her. So, in short, I get to collect all sorts of knowledgealanguage teacher should have from my own experiences as I work as one, in addition to the availability of expert guidance and kind suggestions at the same time.
Despite the fact that passion was the only thing I had at the beginning of my training, due to the guidance and support offered to me plus experiences obtained from both in-person and online classes, lesson planning has become much easier and less time consuming. Continuous learning and practice have improved my language skills and asaresult, my confidence has been boosted toamuch more acceptable level than before. What’s more, communicating with learners of different ages has become less awkward and is now done almost effortlessly. And knowledge on language teaching and learning has also been expanded to some extent. Blue Sky International’s on-job training program can certainly be valuable for enthusiastic learners who are seeking guidance from the more experienced.
Theint Nandar Aung
09254278273, 09886272475, 095043135
Blue Sky International ရဲ့ work-and-study program မှာ volunteer/ teacher trainee အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်လာပြီး ယခုအခါ အတန်းစုံကို စနစ်တကျ သင်ကြားနိုင်ပြီဖြစ်သော ဆရာမ ဒေါ်သိမ့်နန္ဒာအောင် (Teacher Theint) က သူမရဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတွေကို အောက်ပါအတိုင်း မျှဝေထားပါတယ်။
Blue Sky International မှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆရာမလုပ်ဖို့ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လပထမအပတ်ထဲမှာ လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် BSI မှာ ဆရာမဖြစ်လာဖို့အထိ မရည်ရွယ်ထားခဲ့ပါဘူး။ မရည်ရွယ်ရဲခဲ့တာဆို ပိုမှန်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက ‌ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ၊ အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်လာမလဲ စသဖြင့် ခေါင်းပူအောင် စဉ်းစားနေခဲ့ရတဲ့အချိန်ပါ။ Facebook သုံးရင်း အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို မြင်ရင် သူတို့လို စာသင်ရမလားဆိုပြီးတော့ စဉ်းစားကြည့်ခဲ့ဖူးပေမယ့် တကယ်စာသင်တတ်လာအောင် လိုအပ်တဲ့ ပညာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဘယ်နေရာမှာ သွားရှာရမှန်း မသိခဲ့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် Blue Sky International မှာ Volunteer Teacher ခေါ်တယ်ဆိုတာတွေ့တော့ ဝမ်းသာအားရနဲ့ လျှောက်ထားခဲ့မိတယ်။ အဲဒီတုန်းက Teacher Training လို့လည်း ဖော်ပြထားပေမယ့် အဲဒီစကားလုံးကို သိပ်‌တောင်အာရုံမရခဲ့ပါဘူး။ Volunteer (၃)လ လုပ်ရမယ်၊ စာအုပ်ပဲ စီရစီရ၊ ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရ တစ်ခုခုသိရင်ပြီးရောဆိုပြီး လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ အများကြီး သင်ပေးခဲ့လို့ အံ့တောင်ဩရတဲ့ အထိပါ။
လူတွေ့ဖြေဖို့ အီးမေးလ်ပို့လာတဲ့အချိန်မှာ အံ့ဩဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။ လျှောက်လွှာကို ဂရုတစိုက် ဖတ်ပေးမယ်လို့တောင် မမျှော်လင့်ရဲခဲ့လို့ပါ။ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်နေ့မှာ Blue Sky International ကို တည်ထောင်သူ ဆရာမကြီး ဒေါ်လှဝင်းမေဦး (Teacher May Oo) နဲ့တွေ့ဆုံပြီး ‌လူတွေ့ (personal interview) ဖြေခဲ့ရတယ်။ “ဘာကြောင့် ဆရာမလုပ်ချင်တာလဲ” လို့ မေးခဲ့တာကိုတော့ မှတ်မိပါတယ်။ “စာသင်တာကလွဲပြီး ကျန်တာ ဘာမှ မလုပ်တတ်လောက်ဘူးထင်လို့ပါ” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။ မှန်သောစကားကို ပြောခဲ့တာပါ။
သူငယ်တန်းလောက်ကတည်းက အဖေနဲ့ အမေရဲ့မင်္ဂလာဦးဗီဒိုကြီးမှာ မြေဖြူတွေနဲ့ရေး၊ တုတ်နဲ့ထောက်ပြီး စာတွေသင်လွန်းလို့ အခုအချိန်ထိ ခြစ်ရာတွေ ရှိနေတုန်းပါပဲ။ မြေဖြူကိုလည်း ဘူးလိုက်ကို ဝယ်ပေးထားရတယ်။ နောက်ဆုံး မနိုင်တော့လို့ ဗီဒိုကြီးကို ‌ရေးလို့မရတော့တဲ့အထိ ချောသွားအောင် ဆီတစ်မျိုးသုတ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျောင်းသွားရတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတော့ ဆရာလုပ်ဖို့ အခွင့်အရေးက အမြဲရှိနေတာပေါ့။
ဆယ်တန်းပြီးတော့ ရွာက အထက်တန်းကျောင်းမှာ နှစ်လလား၊ သုံးလလား စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝင်လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲဒီအချိန်က ကျောင်းမှာ ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ လူမှုရေးပြဿနာမျိုးစုံကြောင့် ဆရာမ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အထိပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘာလုပ်တတ်လဲလို့မေးတိုင်း စာသင်ဖို့ကလွဲရင် ကျန်တာလုပ်ဖို့ ယုံကြည်ချက် မရှိသလောက်ပါပဲ။
အတိုချုံးပြောရရင် BSI ကို စရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ အနည်းငယ်တတ်တာရယ်၊ ငယ်ငယ်က ရှိရင်းစွဲ ဝါသနာရယ်က လွဲရင် ဘာမှ သိတာ၊ တတ်တာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ ဆရာမ မလုပ်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး နေခဲ့တာ ကြာနေပြီမို့ စာသင်ဖို့ ယုံကြည်ချက်တောင် မရှိသလောက်ပါပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တောင် မယုံကြည်နိုင်တဲ့အချိန်မှာ တီချယ်မေဦးကတော့ ယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။ သူမယုံကြည်ပေးခဲ့လို့လည်း အင်္ဂလိပ်စာဆရာမ ဖြစ်လာရတာပါ။
အင်တာဗျူးဖြေတော့ စနေနေ့ပါ။ အဲဒီနေ့ကစပြီး အလုပ်ဆင်းလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်း၊ (၃)လတာကာလပြီးသွားရင် မိမိစွမ်းဆောင်ရည်ပေါ် မူတည်ပြီး BSI မှာ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ရနိုင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ BSI ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ value တွေကို ရှင်းပြခဲ့သလို အလုပ်လာလျှောက်သူမိမိ ပြန်လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်း မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ အလုပ်လိုချင်တာလား၊ အတွေ့အကြုံရချင်တာလား၊ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားချင်တာလား စသဖြင့်ပေါ့။
နောက်တစ်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကစပြီး BSI မှာ အလုပ်စဆင်းပါတယ်။ “အလုပ်ဆင်းတယ်” ဆိုတဲ့ စကားက မှန်‌တောင်မမှန်ပါဘူး။ သင်တန်းကာလစတယ်လို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ စီနီယာအစ်မတွေ သင်တဲ့ အတန်းတွေကို ဝင်နားထောင်ရတယ်၊ observation လုပ်ရတယ်။ တီချယ်မေဦးရဲ့ IELTS အတန်းတွေ ဝင်တက်ခွင့်ရတယ်၊ တီချယ် စာသင်တဲ့ပုံ၊ ကျောင်းသားတွေကို ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုံ အရာအားလုံးကို အနီးကပ် လေ့လာသင်ယူခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ဆရာ၊ ဆရာမတွေအတွက် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့ Cambridge English | TKT (Preparation for Teaching Knowledge Test) and Teacher Training အတန်း စတဲ့အတွက် ထိုအတန်းကိုလည်း ဝင်တက်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘာသာစကားအနေနဲ့ သင်ကြားတတ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ သင်တန်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဗဟုသုတ အများကြီး ရခဲ့ပါတယ်။ Teaching နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သီအိုရီတွေအပြင် တီချယ်မေဦးက စာသင်ကြားခြင်းနဲ့ သင်ယူသူတွေအပေါ်ထားတဲ့ သူမရဲ့သဘောထားတွေ၊ စာသင်နှစ် (၁၇) နှစ်ကျော်က ရရှိခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှပေးတဲ့အတွက် အများကြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
TKT အတန်းတက်ရင်း လာတက်ကြတဲ့ အခြားဆရာ၊ ဆရာမတွေ လေ့ကျင့်သင်ကြားတာတွေကို observation လုပ်ရတယ်၊ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း သင်ပြရတယ်၊ နောက်ဆုံးမှာ အချင်းချင်း အကြံပြုကြတယ်၊ ဝေမျှကြတယ်၊ တီချယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း feedback ပြန်ပေးတာမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အတန်းတွေ အကုန်ပြီးသွားတဲ့အခါ စာထိုင်လုပ်ရတယ်။ FCE, IELTS စတဲ့စာအုပ်တွေကို အထပ်ထပ် အခါခါ လေ့ကျင့်‌စေပါတယ်။
နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Cambridge English | Starters, Movers, Flyers စတဲ့ အတန်းတွေကို စသင်ရပါတယ်။ ငယ်ငယ်က စာသင်တယ်ဆိုတာက ပရိသတ်မရှိဘဲ တစ်ယောက်တည်း သင်ခဲ့တာဆိုတော့ စစချင်း အင်မတန် ကိုးရိုးကားယားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တီချယ်မေဦး သင်ပြတာကို ထိုင်ကြည့်ရင်း၊ စီနီယာအစ်မတွေ သင်တာကို observe လုပ်ရင်း၊ လေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း အတွေ့အကြုံယူခဲ့ရပါတယ်။
Lesson plan ပြင်တတ်ဖို့ကိုတော့ TKT အတန်းမှာ တီချယ်က စတင်လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တာပါ။ လူနည်းတဲ့ ကလေးအတန်းတွေကို စသင်ရင်း ကိုယ့်ဘာသာ လက်တွေ့လုပ်တတ်လာတယ်။ စစချင်းတော့ ကလေးတွေအတွက် activity တွေ သိပ်မစဉ်းစားတတ်ပေမယ့် တခြားဆရာမတွေ သင်နေတာကို ဝင်ကြည့်ရင်း၊ လေ့လာရင်း၊ ကိုယ့်ဘာသာရှာရင်း ဖွေရင်း၊ အတွေ့အကြုံကလည်း တဖြည်းဖြည်း သင်ပေးသွားပါတယ်။
အားတဲ့အချိန်တွေမှာ တီချယ့်မေဦးရဲ့IELTS အတန်းတွေ တက်ရတယ်၊ ကိုယ့်ဘာသာလည်း တခြားစာအုပ်တွေကို လေ့ကျင့်ရတယ်ဆိုတော့ ဘာသာစကားအသိလည်း ပိုတိုးလာပါတယ်။ Cambridge English | Starters, Movers, Flyers, KET, PET အတန်းတွေကို သင်တော့ lesson plan ပြင်ရင်း၊ သူတို့ကို သင်ဖို့ စာကြည့်ရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်က ကိုယ်မသင်ခဲ့ရတာတွေကို စနစ်တကျ ပြန်လည်သင်ယူခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။
နောက်တော့ တီချယ်မေဦးက စာစစ်တတ်ဖို့၊ အမှားရှာတတ်ဖို့ လေ့ကျင့်ပေးပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ့်ဘာသာလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက် အပေါ်ယံလောက်ပဲ သိခဲ့တာလို့ ပြောရမှာပါ။ တီချယ် သင်ပြပေး၊ လေ့ကျင့်ပေးတော့မှ တဖြည်းဖြည်း ကွဲကွဲပြားပြား သိလာတာကို ဝန်ခံရဲပါတယ်။ အရင်ကဆို ကိုယ့်ဘာသာလည်း ဘာမှားမှန်းမသိ၊ သူများရေးထားရင်လည်း မမှန်မှန်းတော့ သိနေပေမယ့် ဘာက မမှန်မှန်း သေသေချာချာ မသိခဲ့ပါဘူး။
Volunteer ကာလ သုံးလပြီးတဲ့အခါ BSI မှာ ဆရာမအဖြစ် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Training ကာလ ပြီးသွားပြီလို့ တီချယ်က မမှတ်ယူပါဘူး။ စာအမြဲ ကြိုးစားစေပါတယ်။ ဆရာမအချင်းချင်း သင်ယူလေ့လာစေပါတယ်။ သူ့အတန်းတွေကို ဝင်တက်စေတယ်၊ (၁၅) မိနစ်၊ မိနစ် (၂၀) စသဖြင့် အစမ်းသင်ခိုင်းပါတယ်။ ပြီးရင် feedback ပြန်ပေးပါတယ်။ နောက်တော့ ကိုဗစ်ကြောင့် Online Class တွေ စဖွင့်တဲ့အခါ ကျောင်းသားတွေ ပိုများလာတယ်၊ အရွယ်တွေ ပိုစုံလာတဲ့အတွက် အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီး ထပ်ရခဲ့ပါတယ်။
Online Zoom class တွေ စဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ လုပ်သက် (၁) နှစ်ကျော်နေပြီဆိုပေမယ့် တီချယ်ကတော့ အမြဲမပြတ် သင်ကြားပြသနေတုန်းပါပဲ။ သူမကိုယ်တိုင် ဝင်ကြည့်တယ်၊ ပြီးရင် Feedback ပေးတယ်၊ ဘယ်အရွယ်တွေဆို ဘယ်လို activity တွေနဲ့ ကိုက်ညီကြောင်း အစည်းအဝေးကျရင် အကြံတွေ ပေးတယ်၊ စာသင်တဲ့အခါ စာတစ်ခုတည်း မဟုတ်ဘဲ ကလေးတွေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး‌ ကောင်းမွန်ပြီး ယဉ်ကျေးလိမ္မာစွာ ပြောဆိုပြုမူတတ်အောင် ဘယ်လိုလေးတွေ လေ့ကျင့်ပေးရမယ် စသဖြင့် အမြဲတမ်း အကြံပေး၊ လမ်းညွှန်နေတတ်ပါတယ်။
တီချယ်မေဦး သင်တဲ့အတန်းတွေမှာဆို တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာမ (၄)ယောက်လောက် လာစုံ‌တတ်လို့ ပြောရင်းရယ်မိကြပါသေးတယ်။ လာနားထောင်ပြီး သင်ယူကြတာပါ။ တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောရရင်တော့ ကိုယ်တိုင်ဆရာမလုပ်နေရင်းမှာပဲ ဘာသာစကားသင်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို အတွေ့အကြုံကနေ မိမိဘာသာ လက်တွေ့သင်ယူရသလို ညွှန်ကြားပြသပေးမယ့်သူ၊ အကြံပေးမယ့်သူတွေလည်း အမြဲအသင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
သင်တန်းကာလ စစချင်းမှာ ဝါသနာကလွဲပြီး ဘာမှမရှိခဲ့ပေမယ့် သင်ကြားပြသမှုတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အကြံပေးမှုတွေကြောင့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ Lesson plan ကို ပိုပြီး ကောင်းကောင်းပြင်တတ်လာတယ်။ စဉ်ဆက်မပြတ် သင်ယူလေ့လာမှုကြောင့် ဘာသာစကားစွမ်းရည်လည်း တိုးလာခဲ့သလို အတွေ့အကြုံကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုလည်း ပိုရှိလာပါတယ်။
အသက်အရွယ်မျိုးစုံတဲ့ သင်ယူသူတွေနဲ့ ချောချောမွေ့မွေ့ ပြောဆိုဆက်ဆံလာနိုင်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား သင်ကြားမှု၊ သင်ယူမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ဗဟုသု‌တွေအများကြီး တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ မိမိကိုယ်တိုင်က သင်ယူလေ့လာလိုစိတ် ပြင်းပြတယ်၊ ပေးသမျှ ပညာကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ တန်ဖိုးထား လက်ခံတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ Blue Sky International ရဲ့ on-the-job training ကနေ အများကြီး သင်ယူလေ့လာနိုင်မှာ အသေအချာပါပဲ။
အင်္ဂလိပ်စာ၊ ဘာသာစကားကို အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်တစား လေ့လာလိုက်စားပြီး တကယ်တတ်မြောက်အောင် လေ့လာလေ့ကျင့်လိုသူများ၊ အခြားသူများကိုလည်း အမှန်တကယ် တတ်မြောက်အောင် စနစ်တကျသင်ကြားပေးလိုသူများ အတွက် Blue Sky International မှာ on-job training/ work-and-study program တွင် volunteer/ teacher trainee အနေဖြင့် လျှောက်လိုသူများအတွက် အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Cambridge English | TKT | Teaching Knowledge Test Preparation & Teacher Training တက်လိုသူများအတွက် အောက်ပါလင့်ခ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Applied English Grammar online classes
Phonics online classes
on-job teacher training, Outstanding BlueSkyian, work-and-study program. Bookmark.